Rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra ho an'ny Windows 10 (havaozina 2020) - Softwares
Rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra ho an'ny Windows 10
Ny rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra dia mitondra anao ny fahalalahana hanasongadinana ny lafiny horonan-tsary tianao haseho. Azonao atao ny manamboatra ny endriny tsirairay na ny zoro mba hahazoana valiny tsara indrindra. Ao anatin'ny tontolo mihetsiketsika ara-tsosialy izay misy ny fangatahana ‘atiny manankarena’ izay avo indrindra, ny rindrambaiko fanovana horonantsary dia fananana sarobidy tokoa.
Na izany aza, tsy isika rehetra no afaka mividy rindrambaiko ambony naoty ambony indrindra. Ahoana raha misy ny solony amin'ireo rindrambaiko ireo izay manome anao fialan-tsasatra mitovy amin'izany? Ity lisitra ity dia mitondra anao ny lozisialy 10 fanovana horonantsary tsara indrindra maimaimpoana izay mifanaraka amin'ny fepetra takinao isan-karazany. Na te-hiavaka amin'ny atiny ianao na hijery ny fahaizanao mamorona, fitaovana fampitaovana tonga lafatra izy ireo.
Marina izany! Hiditra antsitrika ao anaty tahirin-tsarimihetsika mpanonta horonantsary maimaimpoana ianao. Fa alohan'izay dia andao hivelatra bebe kokoa amin'ireo rindranasa ireo. Izahay dia nanomana ny lisitry ny fonosana rindrambaiko fanovana horonantsary 5 tsara indrindra izay azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana amin'ny PC Windows 10 anao.
Ahoana no anampian'ny fitaovana fanovana horonantsary?
Ankoatr'ireo tombony nomena etsy ambony, ny fitaovana fanovana horonan-tsary dia afaka manampy anao hamaritra ny kalitao sy ny loko. Afaka manambatra horonantsary mihoatra ny iray ianao ary mamorona zavatra manintona. Raha sendra nahita mashup na fusion na fampirantiana isan-karazany ianao dia azo atao izany amin'ny alàlan'ireto fitaovana fanovana horonantsary ireto.
Raha ao amin'ny departemantan'ny marketing ianao dia afaka manampy anao hampiseho ny vokatrao tsaratsara kokoa. Manome anao ny safidy ianao hanampiana vokatra isan-karazany ho an'ny mpamorona votoaty, hetezo ireo ampahany tsy misy dikany ary maro hafa. Amin'ny ankapobeny, toy ny rindrambaiko audio maimaim-poana, ireo dia manampy anao amin'ny fitaovana marobe.
Ity lisitra ity dia misy mpamoaka horonantsary isan-karazany manomboka amin'ny minimalist ka hatrany amin'ny kit fitaovana feno. Manomboka amin'ny fanovana haingana ka hatramin'ny fikojakojana lalina dia hahazo ny zava-drehetra ianao. Ny ampahany tsara indrindra dia afaka daholo izy ireo. Andao hanomboka:
Ny lisitry ny rindrambaiko fanontana horonantsary tsara indrindra:
Ankehitriny ny rindrambaiko fanovana horonantsary voalohany amin'ny lisitra dia ho an'ny matihanina. Blender dia mpamoaka horonantsary loharano misokatra izay azo alaina isaky ny rafitra fiasa lehibe. Mitondra anao ny safidy hanatanterahana asa isan-karazany manomboka amin'ny fitakiana faran'izay kely indrindra sy ny fanaparitahana farafahakeliny hatrany amin'ny masking sy ny fanitsiana loko, eny fa na dia ny effets fanampiny aza.
Tamin'ny voalohany, fitaovana fampivelarana Video 3D izy io, ary mbola misy io lafiny io. Araka izany, manana mihoatra ny azonao angatahina ianao. Ianao koa dia mahazo fanovana am-peo miaraka amin'ny sehatra. Na izany aza, Blender dia tsy tonian-dahatsoratry ny horonan-tsary. Mety hitaky fianarana vitsivitsy alohan'ny hampiasanao azy amin'ny fahaiza-manao rehetra.
OpenShot dia iray amin'ireo rindrambaiko mpanonta horonantsary maimaimpoana tsara ho an'ny windows 10 izay mora sintonina sy ampiasaina. Raha mila zavatra mora kokoa amin'ny mpiorina amin'ny interface mora ampiasaina ianao, dia ny Openshot no kapoakanao dite. Tena tsara izy io amin'ny fanitsiana horonan-tsarimihetsika manomboka amin'ny fanapahana, fampisarahana ary fampidirana vokatra tsotra vitsivitsy. Ho an'ny orinasa na orinasa kely dia mety ho rindrambaiko tsara izany.
IT dia manolotra anao ireo endri-javatra fanovana horonantsary isan-karazany toy ny fanitsiana ny loko, ny greyscale ary ny vokatra hafa. Azonao atao koa ny mampiasa endri-javatra lehibe hamoronana sary mihetsika. Izy io dia tsy misy ezaka amin'ny rafitra ary mandeha tsy misy fangarony. OpenShot dia mifanohitra amin'ny Blender, fitaovana ampiasaina mora foana. Satria loharanom-baovao misokatra izy io dia azonao ampiasaina amin'ny Windows, Linux, na Mac.
Ity misy sisin-tany hafa tsotra sy mora ampiasaina amin'ny mpamoaka horonantsary izay tsara ho an'ny vao manomboka. Ankehitriny, ity iray ity dia tsy miaraka amina endri-javatra na vokany be. Izy io dia manana interface tsara. Azonao atao ny manitsy ny tena izy amin'ny horonan-tsary mihetsika. Na izany aza, manohana ny baiko fototra izy io.
Tsara ho an'ny sivana, fanitsiana fototra, fanapahana, fametahana ary asa tsotra hafa. Raha fintinina dia azonao atao ny miantso azy io ho fitaovana fanovana horonantsary fidirana. Ao amin'ny lisitra ny amin'ny fahatsorany, ary raha mila fitaovana fitakiana ambany-fampisehoana ianao, ity dia iray amin'ireo tsara indrindra.
Ianao ve mitady editor horonan-tsary HD? Ity iray ity dia tokony hiditra ao amin'ny fanangonana anao. Shotcut dia rindrambaiko fanovana horonantsary ho an'ny Linux tamin'ny voalohany. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitatra tamin'ny OS hafa izany. Noho izany, manana interface tsy dia milamina kokoa izy noho ny mpamoaka horonantsary roa teo aloha.
Ny ampahany tsara indrindra momba ny Shotcut dia ny fomba fiasa ampiasain'ny mpampiasa. Manana fampianarana video be dia be ianao hianarana ilay rindrambaiko, ka tsy mila mandeha amin'ny toerana hafa ianao. Izy io dia manohana endrika video marobe nefa tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaony. Satria fitaovana fanovana horonantsary maimaimpoana io dia azonao atao ny miditra amin'ny endri-javatra, fitaovana ary fialamboly hafa azonao amin'ny ankapobeny amin'ny fitaovana fanovana horonantsary premium.
Angamba ianao te-hanome ny sarimihetsika Hollywood avo lenta amin'ny horonan-tsarinao? Avy eo Hitfilm dia ho fampiharana lavorary fanovana horonantsary maimaim-poana. Izy io dia manome anao safidy maro isan-karazany amin'ny endri-javatra, fitaovana, vokany ary mifanentana.
Amin'ny voalohany dia mety ho somary sarotra ihany ny fampiasana azy, saingy somary mety ihany. Hitfilm dia iray amin'ireo mpamoaka horonantsary tsara indrindra azonao angatahina. Na te-hanampy asa an-efijery maitso ianao, manamboatra sarimihetsika vitsivitsy, na manampy vokatra isan-karazany, dia fitaovana avo lenta matihanina io. Na izany aza, tsy misy ho an'ny Linux io.
Ity lisitra ity dia tsy ho feno raha tsy misy DaVinci Resolve. Izy io dia fitaovana fanovana horonantsary matanjaka sy maimaimpoana izay manolotra fanohanana kalitaon'ny Video hatramin'ny 8K. Ampifangaroy izany miaraka amin'ireo endri-javatra ‘mahay’ sy ny fahaizana mampiasa ny rindrambaiko an-tserasera sy ivelan'ny Internet. Toa manintona tokoa, sa tsy izany?
Na dia maimaim-poana aza dia misy ny kinova premium izay mamela ny ‘fanovana horonantsary studio feno.’ Raha atao teny hafa, dia azonao atao ny mahazo ny kalitaon'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika. Izy io dia manana fifehezana manan-tsaina, ary rehefa mandeha ny fotoana, dia nanjary safidy voalohany ho an'ny atiny matihanina sy mpamorona horonan-tsary izy io. Tsy mety diso mihitsy io rindrambaiko io, fa mila mianatra azy ianao.
Andao horaisintsika ny maha-matihanina ireo fampiharana fanovana horonantsary voalaza etsy ambony ary apetraka amin'ny traikefa mpampiasa sariaka kokoa. Eto ianao dia mahazo Ao amin'ilay horonantsary, fitaovana iray izay manome anao safidy sy endri-javatra mitovy amin'izany, fa ho an'ireo mpampiasa vao misokatra na misokatra na miditra. Mihanaka amina departemanta marketing marobe izany noho ny kalitao sy ny fahombiazany tsy misy kilema.
Na izany aza, misy fihemorana mafy izay manohana feo iray indray mandeha. Noho izany, tsara kokoa ho an'ny marketing, bilaogy, ary fampiharana hafa mitovitovy amin'izany. Raha mila zavatra efa za-draharaha kokoa amin'ny sehatry ny audio ianao dia tsy hahazo be. Raha mila tonian-dahatsary fanolorana horonan-tsary sy takiana fanovana video hafa ianao dia tsara izany.
8. VSDC Pro Video Editor
Ity misy rindrambaiko fanovana horonantsary matihanina maimaimpoana sy maimaim-poana. Izy io dia mitondra anao fitaovana feno ilaina tanteraka toy ny fanitsiana ny loko, ny effets isan-karazany, ny sivana sary, sy ny sisa. Mahazo miditra amin'ny sasany amin'ireo sivana malaza sy be mpampiasa indrindra ianao.
Ho an'ny fanovana matihanina dia mahazo masking, blurring ary fitaovana manokana hafa ianao. Ho fanampin'izany, mora kokoa aminao ny mizara asa amin'ny media sosialy. Izy io koa dia manohana ny fanovana horonantsary HD ao amin'ny HEVC sy endrika hafa hitehirizana ny habeny. Ny tena zava-dehibe dia tsy lafo loatra koa ny premium.
Lightworks dia sehatra mendri-piderana iray hafa izay mitondra anao fanovana avo lenta ho an'ny fanalefahana tsotra. Azonao atao ny manova ny hafainganana na manohy manitsy ny horonantsary rehefa mampakatra na manafatra atiny hafa mifandraika amin'izany. Tena marim-pototra izy io, ary azonao atao ny manova ny zoro fakantsary maro ho an'ny tetikasa feno.
Angamba ny lafiny tsara indrindra dia ny fizarana fotoana tena izy ahafahanao miasa amin'ny ekipa. Noho izany, ho an'ireo olona miasa amin'ny faritra lavitra na trano dia safidy tena malefaka izy io. Azonao atao ihany koa ny mizara sy mampakatra horonantsary amin'ny sehatra samihafa. Ho an'ny fiaraha-miasa miavaka, dia ny famoahana horonantsary video tsara indrindra.
Mety hahagaga kely ihany izany, saingy manana fitaovana fanovana horonantsary maimaimpoana i Apple. iMovie dia fitaovana fanovana horonantsary mahavariana sy mahaleo tena ilainao amin'ny sehatra Mac. Tsy mila anao ny mahazo mpamoaka horonantsary hafa raha tsy te-hiditra amin'ny fanovana matihanina ianao.
Izy io dia sehatra feno mifamatotra amin'ny tahiry rahona an'ny Apple ho an'ny fampidinana mora sy ny asa famonjena. Ny tena zava-dehibe dia manana interface mivantana izy io. Apple dia niasa tamin'ny fanomezana ‘easy of use’ ho an'ireo mpiaro azy. Eto ianao dia mahazo fitaovana video maimaim-poana izay mitondra anao tena hijerena ny fahaizanao mamorona.
Misy ny sasany hafa toa ny Windows Movie Maker izay azonao ampiasaina, fa izy ireo dia ifotoran'ny, ary nandrakotra tsara ny safidy tsara indrindra ho an'ireo sehatra maro izahay. Ity lisitry ny mpanova horonantsary ambony ity dia mihevitra ireo mpampiasa manana fepetra isan-karazany. Izany no antony ahazoanao fitaovana fanovana horonantsary maimaim-poana sy ireo izay manana fitaovana matihanina bebe kokoa amin'ny famandrihana.
Na manana fepetra takiana ilaina ianao, fampielezan-kevitra amin'ny marketing, bilaogy, na fitehirizana fitadidiana, ireo fitaovana ireo dia hifanaraka amin'ny lisitra ao anaty magaizinao. Afaka mampiasa fitaovana isan-karazany ianao nefa tsy manary ny rafitrao. Noho izany, ity no fijanonana tokana anao ho an'ny rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra.
5 safidy iMovie tsara indrindra
aiza no hijerena fandaharana amin'ny fahitalavitra
manaova kapoka amin'ny mac
ohatrinona ny mpianatra praiminisitra
mijery sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet tsy misy fampidinana
kaody promo tv youtube maimaim-poana
misy mijery sarimihetsika amin'ny aterineto maimaim-poana tsy misy downloading